Malezia: Tetikasa Fanarenana Faharoa · Global Voices teny Malagasy
Malezia: Tetikasa Fanarenana Faharoa
Nanolotra tetikasa faharoa hanarenana ny toekarena ny governemanta Maleziana.
Voadika ny 13 Avrily 2019 8:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 简体中文, বাংলা, Español, 繁體中文, English
Tsy ampy ilay tetikasa fanarenana ny toekaren'i Malezia natao voalohany tamin'ny 2008. Vokany, nanambara tetikasa fanarenana faharoa ny governemanta ny volana Martsa 2009. Nandritra ny lahatenin-dry zareo teo anoloan'ny Parlemanta, niaro ity andiana fepetra [amin'ny teny anglisy] ity ny Praiminisitra Lefitra sy ny Minisitry ny Fitantanambola:
-Ireto manaraka ireto no tena ifantohan'ity fandaharanasa fanarenana ity:
-Voalohany: manena ny tahan'ny olona tsy an'asa ary manatsara ireo fahafahana mahita asa ;
-Faharoa: manamaivana ny vesatr'ireo olompirenena tsotra, indrindra ireo tena marefo;
-Fahatelo: manampy ny sehatra tsy miankina mba hiatrika ny krizy, ary
– Fahefatra: mampiasa vola hitsinjovana ny hoavy.
Manampy ilay nanoratra ny blaogy fa ”Heverin'ny Governemanta fa feno ny paikady sy ireo fepetra noresahina tao anatin'ity tetikasa fanarenana ity ary hanakana ny toekarentsika mba tsy hijoboka indray anatinà fitotonganana lalina.”
Tsy afaka iantehitra amin'ny politika fanarenana ara-toekarena manaraka ny fomba mahazatra isika. Tsy maintsy hananantsika ny herim-po haka fomba fijery mitondra zava-baovao manoloana ny krizy. Miaina vanimpotoana tena mahatorovana isika rehetra. Tsy maintsy vonona sy mahery isika manoloana ireo fanamby atrehintsika. Tsy maintsy mampiasa ny traikefantsika teo aloha isika mba handresentsika ny krizy.
Mieritreritra ny myAsylum [amin'ny teny anglisy] fa tsy hahomby ilay tetikasa fanarenana:
Tsy maneno tsara ny hoe fanavotana, ny fanarenana kosa anefa maneno amin'ny fomba tsara, na dia vantany vao avy nodinihana aza dia toa tsy nomanina hanetsika na inona na inona mety azo raisina ho toy ny hitondra vokatra ilay fonosana 60 miliara ringgits [52.869 miliara ariary]. Ankoatra ny fankaherezana ny asam-panjakana mba hitombo bebe kokoa nóho ny amin'izao angaha.
Tsindrian'ny E Contrario fa tsy miady amin'ny tsy fananana asa sy ny fahantrana any Malezia ity andianà fepetra ity:
Adinon'ilay fonosana ireo fanavaozana andrimpanjakana, ary tsy noresahiny ny momba ny fanamafisana ireo rafitra fifehezana sy fanatsarana ny fitantanana ara-toekarena.
Noho izany, tsy mahafantatra na inona na inona mikasika ilay krizy isika. Tsy niditra tao anatinà fanavaozana andrimpanjakana tena matotra mihitsy isika na taorian'ny niainantsika ny krizy ara-bola aziatika tamin'ny 1997 aza.
Tsy namaly ny tsy fananana asa marobe sy ny fahantrana tsy mitsaha-mitombo ilay fonosana, indrindra fa ny fahantrana an-drenivohitra.
Tsy azontsika antoka izay fitaovana hanome toky fa mety ho ”mpandrisika” ho an'ireo kilasy ambany ao amin'ny fiarahamonina ny fahatongavan'ireo renivola natsindrona tao amin'ny toekarena. Raha toa ka sady manao kabary mifanohitra amin'ny neo-liberalisma am-pisandratana ny Governemanta, dia toa sady mino an-jambany ny tsena mba hiandraikitra ny famerenana ny fitsinjaràna.
Manantena ny Malaysian Economic Front [amin'ny teny anglisy] fa hamerina ny toekarena amin'ny laoniny ao anatin'ny roa taona midina io fanarenana io:
Mila maminavina isika fa tsy afaka ny hamerina na hamorona tinady mitovy amin'ny fangatahana ny fananantsika talohan'ny nipoiran'ny fitsimbadian'ny fironana ara-toekarena izany mihitsy ny fandaniam-bolam-panjakana. Noho ny fanondranana kely kokoa, hikainkona ny sehatry ny indostriantsika ary hihena amin'ny taha azo zakaina ny zava-bitany. Kanefa, mila maka fepetra mba hisintonana ireo mpiasa noroasina tamin'io sehatra voakasika io isika.
Tsy nahavita nampazoto ny tsenambola ny fanambaràna ilay tetikasa fanarenana . Manamarika i Anil Netto [amin'ny teny anglisy] fa hita ho toy ny ”fanekena ofisialy taraiky ny zavatra nidona tamin'ny firenena tamin'izy tratran'ny fikorontanana ara-toekarena sy ara-bola maneran-tany io drafitrasa io, ary mbola ho avy ny ratsy kokoa”. Tanatinà lahatsoratra feno hatsikana, mampianatra ny mpamakiny ny fomba hivoahana mpandresy miaraka amin'ilay fanarenana i Art Harun [amin'ny teny anglisy].
Teboka iray tao anatin'ilay fandaharanasa ny fanolorana famatsiambola mba handrisihana ireo fianarana any amin'ny ambaratonga ambony. Kanefa, vitsy ihany ireo mpifaninana no nihetsika tamin'izany [amin'ny teny anglisy].
Manao ny lisitry ny sosokeviny ara-toekarena ny solombavambahoaka iray [amin'ny teny anglisy]. Raha ny aminy kosa, manolotra ireto manaraka ireto i Vijay Kumar:
- takalo mba hanoherana amin'ny ampahany ny fampiasambola amin'ireo akora fototra, afaka manakalo ny menaka palmie antsika amin'ny solitany any Arabia Saodita ohatra isika.
- raha tsy voamarina fa tena tandidominà fanafihana antomotra tokoa ny firenentsika, aleo amidy ireo sambo mpisitrika sokajy “Scorpène” sy ireo fitaovana ara-tafika hafa ary mampiasa izany vola izany mba hanatsaràna ny fitateram-bahoaka.
- mamerina mampiasa ny ampahany amin'ireo mpanjono mba hampihatra ny fiompiana trondro, mba hampitombina ny vidin'ny akora iray eo am-pihenàna, mba hiarovana ny zavaboary anaty ranomasina ary hitsitsiana ireo fanampiana amin'ny diesel.
- manafoana ny fibodoan'ny mpamatsy tokana ny tolotra Aterineto, tena ratsy loatra ireo tolotry ny Streamyx hany ka nisalasala ireo orinasa mila fifandraisandavitra talohan'ny niorenany teto.
Avy amin'ny pejy Flickr an'i yinnxp ilay sary kely.